‘जनताकाे माया पाएकाेले म जित्छु’ – गाउँपालिका
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर ०३, २०७४ समय: १२:५८:५४
कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ५, गाेब्रैलाका ४४ वर्षीय वीरमान चौधरी २०५१ सालमा काश्मिरमा गाडीको पार्टस् बनाउने काम गर्थे । त्यही बेला काश्मिरमै उनी माओवादीमा आवद्ध भएर चार वर्षसम्म काम गरे ।
कैलाली क्षेत्र नं. ३, प्रदेश सभा १ का उम्मेदवार
उनले पार्टीमा विभिन्न तहको जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । काश्मिरमा नेकपा माओवादीको नगर कमिटी सदस्य, योङ कम्युनिष्ट लिगको अध्यक्ष, नगर कमिटी सचिव तथा एरिया कमिटी सचिवको जिम्मेवारी वहन गरे ।
२०५४ मा माओवादीको स्थानीय चुनाव बहिस्कारको नेतृत्व गरेका उनले नेपाली सेनाले माओवादी विरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘किलो सेरा टु अप्रेसन’का बेला २०५५ मा नेपाल आएर काम गरे । त्यसपछि पूर्णकालीन सदस्य भएर काम गरेका उनी २०५७ मा कञ्चनपुर जिल्ला कमिटी सदस्य तथा २०५७ देखि २०५९ सम्म बझाङको इञ्चार्ज भए ।
लालसेना बटालियन कमिसार, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी पार्टीको कैलाली–कञ्चपुर जिल्ला सेक्रेटरी भएर काम गरेका उनी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा कैलालीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट सभासदमा निर्वाचित भए ।
माओवादी नेताहरू लेखराज भट्ट र खगराज भट्टसंगै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुने उनी पनि एक हुन् । २०७२ देखि उनी पोलिटब्युरो सदस्य छन् ।
निकै सरल जीवन विताउन रुचाउने वीरमान सेना समायोजनको बेला उनकी श्रीमतीले प्राप्त गरेको पाँच लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये दुई लाख ९५ हजार रुपैयाँबाट धनगढीको मोतिचोकमा १० धुर जग्गा खरिद गरेर तीन कोठाको घर बनाए । अहिले प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका उनीसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
केन्द्रको सांसद भइसकेको मान्छे प्रदेशमा किन लड्नु भयो ?
– हाम्रो पार्टीमा व्यक्तिको ईच्छाभन्दा पार्टीको निर्णय ठूलो हुन्छ । त्यसैले पार्टीले प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै चुनाव लड्न भन्यो, त्यसैले
मैले उम्मदेवारी दिए ।
चुनावी अभियान चलाइसक्नु भएको छ । कस्तो माहोल पाउनु भएको छ ?
– जनताहरू एकदमै खुशी छन् । सम्मानजनक स्थिति छ । जनताहरूले बामपन्थीहरूले केही गर्छन् भनेर बुझेका छन् । जता गए पनि जनताको राम्रो माया सद्भाव पाइरहेका छौं ।
तपाईंका चुनावी एजेन्डा के हुन् ?
– कैलारी गाउँपालिकामा बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्ने, भजनीको बहुमुखी क्याम्पसको स्तर बृद्धि गर्ने, भजनीमा ३० र कैलारीमा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने, डुवान क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर किसानको हितमा काम गर्ने, उद्योगको स्थापनामा ध्यान दिने, सडकको स्तर बृद्धि गर्ने, विद्युतीकरण गर्ने, बढैपुर हसुलिया, हलमानपुर लालबोझी, भजनी सुखड सडकलाई व्यवस्थित बनाउने, विगतमा पनि हामीले ती सडकको योजना हाल्नका लागि विशेष पहल गरेका थियौं । जोशीपुरको सडक बांग्रो थियो । त्यसलाई सिधा बनाएर हामीले पिच गरायौं ।
यति धेरै काम गरेको भन्नुभयो, तर पनि यो क्षेत्र किन पछाडि परेको होला ?
– यो क्षेत्रमा पहिला सडक यातायात थिएन । त्यसैले यो पछाडि पर्‍यो । २०६४ मा सभासद् जितेपछि हसुलियामा ल्याण्डलाईन टेलिफोन राख्न खोजे, तर टेलिकमको नियमअनुसार टेलिफोन लिन चाहनेको संख्या १५० हुनु पर्ने थियो । त्यो नपुगेर टेलिफोन सेवा विस्तार हुन सकेन । त्यसपछि त्यति बेला माओवादीबाट जितेका ६ जनै सभासदहरूले दवाव दियौं । ढिलो भए पनि हुलाकी बनाउन सफल भयौं । अब टेलिफोन लाइन लिनेको संख्या टेलिकमले तोकेअनुसार पुग्ने अवस्थामा छ । अब यो क्षेत्रमा चाँडै ल्याण्डलाइन सेवा विस्तार हुन्छ । हसुलियादेखि भजनीसम्मको हुलाकी सडक पूर्णरूपमा बन्ने हो भने अझै धेरै विकासका सम्भावना खुल्ने छन् । हामी त्यो सडक बनाउनलाई लागिपरेका छौं । त्यो काम केही महिनाभित्रै हुन्छ भन्ने लागेको छ । मेरै पहलमा हुलाकी सडकका कटैनी, सुर्मिनाला, झर्निया नाला अझै व्यवस्थित भएको छ । हुलाकी सडकमा अझै पनि जम्नेटा खोला, केआईसिंह फाँटा, वसन्ता क्षेत्रमा गरेर तीन वटा पुल बनाउन जरुरी छ । हसुलिया र भजनीका छोटी भन्सारहरूको स्तरोन्नती गर्न जरुरी छ ।
कैलारी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकालाई अझै विकसित गर्नलाई अझै केके काम गर्नुपर्छ ?
– मसंग यो क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै योजना छन् । धेरै योजना त मैले माथि उल्लेख गरी सके । फेरि पनि यो क्षेत्र कृषि क्षेत्र भएकोले यहाँ कृषि क्याम्पस स्थापना गर्न जरुरी छ ।
यहाँ राम्रो वनक्षेत्र छ । त्यसको समुचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । वसन्ता जैविक क्षेत्र, तालतलैया र थारू होमस्टेलाई अझै व्यवस्थित बनाएर पर्यटक भित्र्याई यहाँको जनताको आम्दानी बढाउनुपर्छ । कान्द्रा पचमुडियामा पुलको योजना हामीले पहिले नै तयार गरेका छौं । त्यसलाई कार्यान्ववयन गर्नुपर्छ । हाम्रै पहलले मनाउ, मझरा, वनजरियामा झोलुंगे पुल बन्दै छन् । पृथ्वीपुर र पहलमान गाउँमा पनि झोलुंगे पुल बनाउन आवश्यक देखेको छु ।
तपाईंलाई जनताले कत्तिको विश्वास गर्छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
– म चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु । यसका धेरै कारण छन् । जस्तो, म पदमा भए पनि अथवा नभए पनि सधै जनताको बीचमा छु । जनताको हरेक सुखदु:खको साथी हुँ । जनतासँग मेरो सहज पहुँच छ । त्यसमा पनि यो क्षेत्रमा माओवादी पार्टी बलियो हो ।
पछिल्लो पटक बामपन्थी एकताले कार्यकर्ता र जनता उत्साहित छन् । त्यसैले म जित्छु भन्नेमा ढुक्क छु ।
३ महिने मोबाईल मर्मत तालिम सम्पन्न
चौनपा २ का ७६ घर सदा बस्तीलाई खाद्यन्न बितरण